ဇွဲထက်| December 20, 2012 | Hits:2,275
0 | | ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီ – ကော့ကရိတ်လမ်း ဒေါန တောင်တက်လမ်း တနေရာတွင် တွေ့ရသည့် ကုန်စည်များ တင်ဆောင် ထားသော ကားတန်း (ဓာတ်ပုံ – ဇွဲထက် / ဧရာဝတီ)
လယ်သမားများ ခွင့်ပြုချက်ယူ၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်
ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စ နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ဟု KNU ပြော
DKBA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောလားပွယ် ပြည်ပ၌ ဆေးကုရန် စီစဉ်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment bomdu December 23, 2012 - 4:17 pm	ဟဲ ဟဲ ဟုတ်?
KNU နှင့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်စရာ အကြောင်းမရှိဟု DKBA ပြော
DKBA နှင့် အစိုးရတပ် တိုက်ပွဲရပ်၍ အာရှလမ်းမ မနက်ဖြန် ပြန်ပွင့်ပြီ
DKBA နှင့် အစိုးရတပ် တိုက်ပွဲများကြောင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကို ဘယ်လို သက်ရောက်မလဲ
တိုက်ပွဲအရေး ဆွေးနွေးနေစဉ် DKBA စခန်းများတွင် တိုက်ပွဲများဆက်ဖြစ်
အစိုးရတပ်နှင့် DKBA တိုက်ပွဲ ရပ်စဲလိုက်ပြီ